Nke a bụ nhọrọ anyị kacha mma add-ons maka Microsoft Flight Simulator 2020 (MSFS2020). Mfe echichi nke add-ons nbudata ọ bụla na-esonyere onye nrụnye akpaka. Họrọ otu n’ime ngalaba ndị ahụ iji malite nbudata gị.
Site n'ụgbọ elu ọkụ ruo na ụgbọelu sara mbara, gbaa ụgbọ elu zuru oke na nke ziri ezi n'ọgbọ nke Microsoft Flight Simulator. Nwaleenụ gị piloting nkà megide ihe ịma aka nke abalị na-efe efe, ezigbo oge ikuku ịme anwansị na ndụ ihu igwe na a ike na ndụ ụwa. Mepụta atụmatụ ụgbọ elu gị na ebe ọ bụla na mbara ala.
Nbudata maka Microsoft Flight Simulator 2020
Onweghi faili dị maka ụdị a.